Yunivarsitiin Baahirdaar afaan Oromoofi Gi'iizii barsiisu eegaluuf - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, FACEBOOK/BAHIRDAR UNIVERSITY
Yunvaristii Baahir Daar
Yunivarsitiin Baahir Daar gosawwan baroontaa afaan Gi'iziifi Afaan Oromootiin fedhii barattootaa eegameen ol argamusaa beeksisee. Fakkeenyaaf gosa barnoota Gi'izii barnoota sadarkaa digirii lammaffaatiin kennuu eegaleen, beeumas Itoophiyaa jaaraa duriifi jiddu galaa dhokatanii turan sacca'uufi karra qorannoo saaquuf kaayyoo akka qabu beksiseera. Leenjiin afaan oromoo barsiistoota, hojjattootaafi barattoota yunivarsitichaa fedhii qabaniif kennuu eegaleenis namoota hedduu harkisuu isaa ibsameera. Afaanichis bara dhufu barnoota idileetiin digirii sadarkaa tokkoffaan akka kennamu eegala. Yunivarsitichatti Ittigaafatamaan Kutaa barnoota 'humanity' kan ta'an Dr Daawitii Amonya BBC'tti akka himanitti, afaan Gi'izii akka sirna barnootaatti qophaa'uun gimgimaa barbaachisu kan darbee ji'ootaan dura yoo ta'u, amma raggaasifamuun gar hojiitti galameera.
''Kaayyoon kutaa barnoota kanaa inni guddaan beekumsaafi ammayyummaa biyyattii dura qabduufi kan hinbaramiin kan akka wallaansaa, falaasamaafi aadaa, amataafi beekumsawwan bulchiinsaa qorachuuf kara saaquu,'' jechuun BBC'tti himaniiru. Barsiistoota Gi'iizii haala gahaa ta'een argachuu dhabuun rakkina cimaa akka ta'e Dr Daawiitti himanii rakkinicha hiikuuf hojachaa jirra jedhaniiru. Akkasumas Yunivarsitichi Afaan Oromoo barsiisuu kan eegale leenjiiwwan gagabaanoon yoo ta'u, bartoonnis beekumsa afaanii isaanii ilaalamuun waraqaan ragaa kennamaaf jedhaniiru. Leenjitoon marsaa tokkoofaaf galmaa'an 50 yoo ta'an, baayinni namoota barachuu barbaadanii leenjii dabalataafi itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf dirqisiisu isaa himaniiru. Yunivarsitichi bara dhufu keessa afaan oromoo sadarkaa digirii tokkoffaatiin barsiisu kan eegalu yoo ta'u, leenjiin al-idilee amma kennu eegalee ammaaf kan hawaasa yunivarsitichaa irratti qofa xiyyeefate ta'u barameera. ''Leenjichaaf wayita waamicha taasifamu barsiiftoonni, hojjattoonni bulchinsaafi itti gaafatamtoonnihedduun fedhii agarsiisuub barachuu eegalaniiru,'' jedhu itti gaafatamaan kun. Erga Yunivarsitiin Baahirdaar Afaan oromoo sadarkaa digirii jalqabaatiin barsiisuun gabaafameen booda, lammiilee barnooti afaan kanaa akkaa qubbee gi'iziitiin kennamuuf gaaffii dhiyeessan jiru.
Haa ta'u malee tarkaanffiin kun barattoota hawaasa afaanicha haasa'aan adda waan qooduuf fudhatama akka hinqabaannee Dr Daawiiti ni ibsuu. ''Jijiramni kan barbaachisu yoo ta'e, abbootii afaanichaa hawaasa afaanicha dubbatanii waliin mari'achuun yoo geeddaran malee, afaan tokko keessatti sirni barreessu lama jiraachu hindanda'u.'' jedhaniiru.
Ameerikaatti reeffii dargaggoo dhalataa Itoophiyaa mukaratti faniifamee argamuun gaaffii kaasee
Amaanu'eel Taamiraat biyya Ameerikaa erga dhaqee waggoota 15 kan jiraatee yoo ta'u, dargaggoo umuriin waggaa 20 ture. Biyya Ameerikaatti paarkii Liiwuus Mooriis jedhamu keessatti faniifamee du'ee reeffisaa kan argamees Waxabajjii 29, 2020 ture.
12 Adooleessa 2020
Lolaa hamaa Buraayyuutti mudateen lubbuun namoota sagalii darbee, kaan barbaadamaa jiru
Rooba cimaa aanaa Sabbataa Hawaasitti cabbii makatee roobeen lolaa cimaan uumamee, gandoota bulchiinsa Buraayyuu keessatti argaman lama keessatti namoota sagal galaafachuun qabeenya guddaa irraan miidhaa geessisuu himame.
KALLATTIIN Itoophiyaatti namoota Covid-19 qabaman 7,560 keessaa 4,306 bayyaannatan
Itoophiyaatti namoota koronaavaayirasiin qabamunsaanii mirkanaa'ee 7560 keessaa wallakkaan ol kan ta'an yoo fayyan, kanneen lubbunsaanii dhaban ammoo 127 gaheera.
10 Adooleessa 2020
Lakkoofsa hanga ammaa jiruun namoonni nagaafi humnoonni nageenyaa 200 ol ta'an torban tokko keessatti lubbuu dhabaniiru.
Dubbii Himaan Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigiraay (TPLF) Obbo Geetachaw Raddaa, ajjeechaa Hacaaluu keessa tasumayyuu qooda hin qabnu, keesssattis tasumaa hin hirmaanne' jedhan. Mootummaan kana dura TPLF fi hidhattoota duraanii ABO ajjeechaa Hacaaluun himatee ture.
Malkaa Bal'ootti bokkaa cimaa roobeen maatii lama irraa namni torba du'e
Doonaald Tiraamp dhumarratti ummata fuulduratti maaskii godhatan
Koroonaavaayiras: Dhukkubni qilleensaan akkamiin daddarba?